CSS Hero dia loharano mahafinaritra ho an'ny fanovana CSS amin'ny lohahevitra WordPress nandritra ny fotoana elaela. Ny fitaovana toy itony dia manao fanamorana tsotra ho an'ireo mpampiasa WordPress izay te-hampanjifa ny endrik'izy ireo, saingy tsy manana traikefa amin'ny kaody CSS ilaina.
Theme Agnostic - Ampio herim-po Hero amin'ny lohahevitrao, tsy mila kaody fanampiny amin'ny loha-hevitrao no ilaina ary mamela fifehezana feno ny fananana \_ singa tianao ahitsy.
CSS Edits History - Ny CSS Hero dia mitahiry ny fanitsiana anao amin'ny lisitry ny tantara amin'ny antsipiriany, mora ny mandeha miverina sy mandroso amin'ny dingana tantara toy ny fipihana ny bokotra undo \_ hanavao.
CSS Hero Inspector - Inspector dia Plugin CSS Hero izay mamela fifehezana fanampiny amin'ny kaody noforonin'i Hero. Amin'ny inspector dia afaka manadio mora foana ianao, manova, manaisotra ny fomba namorona ny Hero na koa manampy ny anao manokana toy ny fanaonao matetika amin'ny fitaovana fanaraha-maso tranonkala tianao indrindra toa ny Inspecteur Chrome na Firebug.